Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed Maxamed ayaa duhurnimadii maanta gaaray magaalada Garowe ee Caasimada Puntland, halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyay.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa ka mid ahaa Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka, Wasiiro, Xildhibaano, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas, kuxigeenkiisa iyo mas’uuliyiin kale.
Ammaanka magaalada Garowe ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana soo dhoweynta wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ka qeyb qaatay dadweyne fara badan oo watay sawiradiisa, kuwaasoo wadooyinka taagnaa.
Wafdiga ka socda dowladda Federaalka ayaa loo gelbiyay Xarunta Madaxtooyada Garowe, halkaasoo wada hadalo labo geesood ah ay kula qaadan doonaan Maamulka Puntland.
Maamulka Puntland ayaa bishii Agosto xiriirka u jartay dowladda Federaalka, kadib markii ay ka soo horjeesatay heshiiskii maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud, waxaana dowladda Federaalka iyo Puntland u socday wada hadalo hoose.